Kazakhstan: Mihitatra ny fanivanana bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Mihitatra ny fanivanana bilaogy
Voadika ny 17 Febroary 2019 3:42 GMT
Lasa lasibatra faharoa amin'ny hetsika fanakanana ao Kazakhstan taorian'ny LiveJournal ny bilaogy ao amin'ny mail.ru – vavahadin-tserasera Rosiana malaza ahitana vaovao, fialamboly ary mailaka. Ho an'ny bilaogy ihany ny fandavana fidirana avy amin'ny tolotra fifandraisandavitra nasionaly, mandeha tsara kosa ny tolotra hafa ao amin'ny vavahadin-tserasera. Azo idirana amin'ny alalan'ny fanafenana mari-panondroana kosa ny sehatra bilaogy.
Ny Livejournal (tsy mbola niaiky ny fanivanana ity tranonkala ity ny Kazakhtelecom) no heverina ho lasibatry ny fifandonana ara-politika teo amin'ny manampahefana sy Rakhat Aliev, vinanton'ny filoha teo aloha sady mpanefoefo amin'ny media any am-pandosirana, ary voaheloka higadra 40 taona an-tranomaizina noho ny fakàna an-keriny sy fanomanana fanonganam-panjakana. Manana bilaogy roa ao amin'ny Livejournal ilay lehilahy.
Saingy sarotra kokoa ny fahitana ny anton'ny fanivànana ny blogs.mail.ru. Tsy olo-malaza no tompom-botoaty ao amin-dry zareo ary voatendry ho azy ho an'ny tompon'ny mailaka tsirairay. Tsy misy mpanohitra – ary araka ny hiheverana azy – tsy nisy bilaogin'i Aliev tao. Nahoana no ilaina ny manakana izany? Politika fiarovana ho fanohanana ny sehatra bilaogy mankatòa kokoa ao amin'ny firenena ve? Tsy misy mahalala.
Mahaliana fa tamin'ny andro voalohany nanakatonana ny blogs.mail.ru, nisy olona niezaka namorona kaonty amin'ny anaran'i rakhataliev tao amin'ny sehatry ny bilaogy Kazakhstani antsoina hoe yvision.kz. Tao anatin'ny ora iray na roa, dia nesorina ilay kaonty. Na dia izany aza, tsy fantatra hoe Aliev tenany sa ny namana atokisany no nanao izany.
“Ity no lalana marina, ry namana !!!”, megakhuimyak nanonona an'i Vladimir Lenin [ru]:
“Hampalaza an'Atoa Aliev ny Paranoia ao amin'ny Sampan-draharahan'ny fampitaovana solosaina sy ny fifandraisana – ary ho henatra lehibe ao amin'ny firenena sy ny fitantanany.” Tokony hametra-pialana mandrakizay ny mpiasa manontolo ao amin'ny sampan-draharaha. Raha manana “namana” tahaka izany ny firenena, dia tsy mila fahavalo akory izy “.
Manana esoeso ratsy amin'ny ahiahiny i Eev fa mety avoaka amin'ny toerana sasany ny aterineto – tahaka ny siramamy nandritra ny perestroika. Cyber-gorynych indray nivazivazy fa mety ho azo atao ny mahazo vaovao fotsiny momba ny toetr'andro any Kazakhstan raha mbola mitohy ny fironana : “Miditra ao amin'ny milina fikarohana ianao, mandefa ny fangatahanao ary milaza ny valiny nalefa hoe:” Miala tsiny, tsy misy na inona na inona hita. Toetr'andro ve no tianao lazaina? “[Ru].
Mampitaha amin'ny Livejournal [ru] ihany koa i Programmila:
Mitovy ny sary … Maimbo tahaka ny hadalana izany. Raha ny tena marina, tsy miady hevitra mihitsy aho rehefa mifanakalo hevitra momba ny olan'ny hadalana sy ny sampan-draharahan'ny fampitaovana solosaina sy ny Fifandraisana ny olona… mihevitra ny hametraka lohamilina DNS kely any an-trano aho amin'izao fotoana izao …
Mampiseho izany fa amin'ny raharaha Livejournal, voasakana ny tranonkala iray manontolo, fa tsy ny URL “ahitana olana” miavaka. Tamin'ity indray mitoraka ity, dia nahavita nanivana ny blogs.mail.ru ihany ireo mpanivana. Satria atao amin'ny fomba tena raitra ny fanivànana ao Kazkahstan – amin'ny alalan'ny laharana IP-n'ny lohamilina, araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana. Manana fantsona maro sy milina hita vatana ny vavahadin-tseraseran'ny mail.ru- lohamilina mitokana no mampandeha ny bilaogy.
Nalefa tao amin'ny Neweurasia ihany koa.